HomeWararka Ciyaaraha MaantaNatiijooyinka kulamda Premier League Manchester United iyo Arsenal oo guulo gaaray
May 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
kulamo ka tirsan Horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Manchester United ay booqasho ugu tagay Aston Villa halkaasi oo ay uga soo badisay 1-3.
Bruno Fernandes ayaa rikoodhe u dhaliyey Manchester United daqiiqaddii 52aad, waxaana mid kale raaciyey Mason Greenwood oo hoggaanka u dhiibay kooxdiisa iyadoo kubbad fudud uu dhaafiyey goolhaye Martinez, ka hor intii aanu Edinson Cavani oo beddel kusoo galay saddexda dhibcood kooxdiisa ugu xaqiijin madax uu ku qabtay kubbad uu dhinaca midig kasoo qaaday Marcus Rashford.
Aston Villa ayaa ciyaarta ku dhamaysatay toban laacib, waxaana laba kaadh oo digniin ah oo casaan noqday qaatay weeraryahanka da’da yar ee reer England ee Ollie Watkins oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ka baxay garoonka.
Guushan ay Manchester United gaadhay ayaa waxay kusoo yaraysay farqiga dhibcaha Manchester City ay hoggaanka horyaalka ku hayso oo hadda ah 10 dhibcood, waxaanay Pep Guardiola iyo kooxdiisu sugi doonaan in ay horyaalka ku guuleystaan illaa inta ay kasoo baxayaan natiijooyinka kulamada Salaasada.
Manchester United ayaa yeelatay 70 dhibcood, halka Man City ay haysato 80 dhibcood, waxaanay Red Devils oo hal ciyaar ahi u hadhsan tahay iyaga iyo Liverpool ay lix dhibcood ka horreysaa Chelsea oo kaalinta saddexaad ku jirta.
kooxda Arsenal ayaa dhankeeda guul daro dhabarka u saarisay kooxda West Bromwich Albion kulan ka tirsan Horyaalka Premier league oo ku soo dhamaaday 3-1.
Arsenal ayaa laba gool oo qurux badan heshay qaybtii hore, waxaana midka hore saxeexay laacibka da’da yar ee Smith Rowe oo lugta bidix ku toogtay kubbad uu dhinaca bidix kasoo jabiyey Bukayo Saka, taas oo goolhaye Sam Johnstone uu joojin kari waayey.
Goolkan ayaa dhashay daqiiqaddii 29aad ee qaybta hore ee ciyaarta, waxaana iyagoo West Brom aan wali jaanta isla helin oo kasii niyad-jabsan goolka lagala hormaray ay haddana arkeen kubbad awood badan oo shabaqooda uu dhex dhigay Nicolas Pepe, kaas oo daqiiqaddii 35aad uu shabaqa ku hubsaday.
Kubbad uu Calum Chambers dhinaca difaaca kasoo kexeeyey ayaa waxa uu garabka midig ee xerada garaanaxa bannaankeeda uu ugu geeyey Nicolas Pepe oo isaguna hore ula soo dhaqaaqay, kaddibna lugta bidix inta uu ku sallaxday laad awood badan oo xeegaysan ku toogtay goolka uu waardiyaha ka ahaa Sam Johnstone oo isagoo daawanaya ay kubaddu cidhifta shishe kasoo gashay shabaqa iyadoo lagu kala nastay labadaasi gool.
Qeybta danbe kooxda Wesbromwich ayaa heshay gool qurux badan daqiiqadii 67aad ee ciyaarta lakin Willian ayaa Arsenal u sii xaqiijiyay guusha kulankan daqiiqadii 90aad ee ciyaarta guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-1 oo Arsenal u suura galisay in ay soo gashay booska 9aad.